» धेरै मासु खानुहुन्छ ? मासु खानुभन्दा अगाडि यी कुराहरु जान्नुस्
धेरै मासु खानुहुन्छ ? मासु खानुभन्दा अगाडि यी कुराहरु जान्नुस्
६ बैशाख २०७५, बिहीबार ०३:५९
एजेन्सी, ६ बैशाख । अहिलेको समयमा हामीले विभिन्न बहानामा आवश्यकताभन्दा बढी मासु खानु सामान्य जस्तै भइसकेको छ । हरेक कार्यक्रम र पार्टीमा मासुका परिकार समावेश गरिएको हुन्छ । कतिपय संस्था र समूहले साकाहारी बनाउने अभियान थालेता पनि मानिसको व्यक्तिगत रुचिलाई परिवर्तन गराउनु निकै नै चुनौतिपूर्ण कार्य हो ।
तर तपाईँ मांसाहारी वा साकाहारी हुनुले पनि तपाईको स्वास्थ्यमा निकै नै फरक पार्छ । विभिन्न अध्ययनहरुले मासु खानेको भन्दा मासु नखाने साकाहारी व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य राम्रो हुने प्रमाणित समेत गरिसकेको छ । अध्ययनहरुका अनुसार सबै प्रकारका मासु तथा माछामा स्याचुरेटेड फ्याट पाइन्छ जसले गर्दा कोलस्ट्रोल बढ्छ । यसको कारणले मुटुसम्वन्धि रोगहरु पैदा हुन्छन् । जबकि शाकाहारी भोजनमा स्याचुरेटेड फ्याट कम हुन्छ । अध्ययनहरुका अनुसार मानिसहरु शाकाहारी भोजन गर्छन् उनीहरुको कोलस्ट्रोल लेवल घट्छ र मुटुसम्वन्धि बिमारीहरुको खतरा पनि कम हुन्छ । मासु नखानुका फाईदाहरु र खाँदा हुने बेफाईदाहरु के–के छन् त ? आउनुस् यस बारे चर्चा गरौँ ।
१) तौल नियन्त्रण हुन्छ
मासु खान छोडेमा मानिसहरुको वजन लगभग १० पाउण्डसम्म कम हुन्छ । यसबाट तौल बढ्ने चिन्तामा बस्नुपर्दैन । तर यसको विपरित यदि मासु खाएमा तौल वृद्धि हुनसक्ने सम्भावना निकै नै हुन्छ ।
२) पेटमा प्रोटेक्टिभ ब्याक्टेरिया बढ्छ
अध्ययनहरुका अनुसार शाकाहारी भोजन गर्ने मानिसहरुको पेटमा बढि प्रोटेक्टिभ ब्याक्टेरिया पाइन्छ । जबकि मासु खाने मानिसहरुमा यसको अभाव हुन्छ । त्यसैले मासु नखाँदा पेटमा प्रोटेीक्टभ ब्याक्टेरीया बढ्छ ।
३) छाला स्वस्थ र सफा हुन्छ
शाकाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिहरुको छालामा बढि डण्डीफोर, कोठी देखिँदैन । यदि तपाईं मासुको साटो फल र तरकारीहरु खानुहुन्छ भने तपाईंको छाला पनि सफा र स्वस्थ हुन्छ ।
४) शरीरमा फुर्ति बढ्छ
५) मुटु रोगको खतरा कम हुन्छ
रातो मासु खाँदा मुटु रोगका खतरा अधिक हुन्छ । रातो मासुमा मौजूद कार्निटिनको केमिकल रियाक्सनका कारण हाम्रो मुटुमा यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ ।
Source : hanifsamana Blog
६) कोलस्ट्रोल एक तिहाई कम हुन्छ
यदि तपाईंले मासु खान छोडिदिनुभयो भने तपाईंको रगतमा कोलस्ट्रोलको मात्रा एकाएक कम हुन्छ । यसको तुलना कोलस्ट्रोल कम गर्ने औषधिसँग पनि गर्न सकिन्छ ।
यसको अलवा मासु खान छोडेर तरकारी मात्र खाने गरियो भने हाम्रो जीन निकै राम्रो हुन्छ । यसले शरीरको कामलाई सामान्य गर्न मद्दत गर्छ । हाम्रो जीनले राम्ररी काम गर्छ । तर मासु खान छाडियो भने शरीरमा आयोडिन, आइरन, भिठामिन डी र बी १२ को कमी हुन सक्छ । त्यतिबेला यी पोषक तत्वहरुयुक्त सप्लिमेन्ट सेवन गरेर यसको कमि पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जिंक हाम्रो जिब्रोको टेस्ट सेन्सेसनका लागि एक आवश्यक तत्व हो । रेड मिट र ओइस्टरमा अधिक मात्रामा जिंक पाइन्छ । तर, शाकाहारी भोजन गर्ने व्यक्तिहरुले कुनै अन्य स्रोतबाट जिंक प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जिब्रोले स्वाद थाहा पाउन छोड्दै जान्छ । मांसपेशीहरुलाई मजबुत राख्नका लागि प्रोटिनको सबैभन्दा बढि आवश्यकता हुन्छ । प्लान्ट प्रोटिनले काम सुरु गर्न अत्यधिक समय लिन्छ । त्यसैले मासु सिमित रुपमा मात्र खाँदा राम्रो हुन्छ तर मासुका परिकारबाट हुने बेफाईदा कम गर्न भने शाकाहारी बनेर अपुग प्रोटिनहरुलाई विभिन्न अन्य माध्यमबाट पुरा गराउन सकिन्छ ।